PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - Kuhlupheka abagibeli kuvinjwa amatekisi
Kuhlupheka abagibeli kuvinjwa amatekisi
SEBELUBHADA phansi abantu abasuka KwaSanti, Klaarwater, KwaNdengezi naseDassenhoek abaya esibhedlela iRK Khan eChatsworth ngemuva kokuvinjwa kwamatekisi alezi zindawo ukuba angene eChatsworth.
Isolezwe lithole ukuthi sekuphele inyanga amatekisi alezi zindawo evinjwa wosomatekisi baseChatsworth abangaphansi kweChatsworth Minubus Taxi Association.
UNkk Nomalizo Mzobe, olanda amaphilisi esifo esingalapheki eRK Khan utshele Isolezwe ukuthi ulibasha ngonyawo esuka eKlaarwater eya eChatsworthn ngenxa yokuthi amatekisi aseKlaarwater awasavumelekile ukuyorenka eChatsworth.
“Sibuzile ukuthi usoseshini uzokwenzani kodwa satshelwa ukuthi luyaxoxwa lolu daba,” kubuza uNkk Mzobe.
UNksz Ntombi Malinga waseDassenhoek uthe usesebenzela imali yokugibela selokhu kwavinjwa amatekisi.
Uthe ekuseni ugibela itekisi eya ePinetown, axhume ngeya eChatsworth kuleli dolobha, nantambama yiso leso.
UMnuz Kwanele Ncalane, wezokuxhumana eMnyangweni wezokuThutha nokuPhepha koMphakathi esifundazweni, uthe uNgqongqoshe walo mnyango uMnuz Mxolisi Kaunda uzolusukumela lolu daba.
“Ngesonto elizayo kuzoba nomhlangano wososeshini bamatekisi athintekayo ngoba uNgqongqoshe ufuna abantu bahambe kahle ukuya eRK Khan.”
UNobhala kasoseshini waseChatsworth ozibiza ngoLeon, uthe amatekisi akwezinye izindawo awanayo imvume yokungena eRK Khan wase evala ucingo.
UMnuz Mathula Mkhize onguSihlalo wesifunda iDurban West kwiSantaco, okukhona ososeshini baseDassenhoek, KwaSanti/Klaarwater nowaKwaNdengezi, uthe udaba lwalabo soseshini lusenkantolo ngoba abaseChatsworth babafake enkantolo ukubavimba ukungena kule ndawo.
“Isisombululo sesikhashana sicele owasePinetown ukuthi uthuthe abantu abaphuma ezindaweni ezakhele iPinetown ubayise kulesi sibhedlela. Asikwazi ukuphawula ngodaba olusenkantolo, lungaphezulu kwamandla.”